कम्युनिस्टहरु निरंकुशता छाड्नै सक्दैनन्-डा. शेखर कोइराला
On: २०७७ पुष १३ गते, सोमबार, ०४:२४ बजे प्रकाशित
माेरङ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन नहुने बताएका छन्। विराटनगरमा सोमबार पार्टीले आयोजना गरेको विरोधसभामा उनले कम्युनिस्टसँग मिलेर अघि नजान पहिलेदेखि नै बीपी कोइरालाले समेत सचेत गराएको सुनाए।
उनले भने, “कम्युनिस्टलाई लोकतान्त्रिक बनाउन प्रयास गरे पनि उनीहरुले निरंकुशता छाड्नै सक्दैनन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम हाे।” उनले सर्वोच्चले निर्वाचनमा जान आदेश गरे त्यसलाई सुनिश्चित गर्न कांग्रेस सडकमा उत्रने चेतावनीसमेत दिए।
कम्युनिष्ट सरकारको रवैयाका कारण जनताको पक्षका कांग्रेस सडकमा आएको बताउँदै उनले अब कांग्रेसले सडक लिने र त्यहीबाटअघि बढ्नेतर्फ लक्षित रहने प्रष्ट्याए। उनले वैशाख १७ र २७ गतेको निर्वाचनका लागि कांग्रेस तयार अवस्थामा रहेका बताए। सोही निर्वाचन सुनिश्चित गर्नका लागि कांग्रेस निरन्तर सडमा उत्रिने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको बताएका नेता कोइरालाले अन्य दुई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालपनि ओलीसँगै उत्तिकै दोषी रहेको उनको भनाई छ। भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा दुवै जना प्रधानमन्त्री ओलीको मतियार रहेको उनले बताए।
कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाले कांग्रेस सधैँ लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको बताइन्। उनले पछिल्लाे राजनीतिक कदमले मुलुककाे गणतन्त्र र संविधान संकटमा परेकाे बताँउदै सरकारकाे लालमाेहर नबन्न राष्टपतिलाई आग्रह समेत गरिन्। उनले भनिन्,”तपाई संविधानकाे सीमामा रहनुस्, यदि स‌ंविधानकाे दायरामा नबस्ने राष्टपतिलाई नेपाली जनताले मान्ने छैनन्”, उनले बताईन्।
संसद विघटनको विरोधमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले सोमबार १६५ निर्वाचन क्षेत्रमै विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
२०७७ पुष १३ गते, सोमबार, ०४:२४ बजे प्रकाशित